Isicelo se-Yurie BSF • UYurie BSF
Isicelo seYuroe BSF
Yurie | Nov 22, 2018 | Khuphela i-Yurie BSF Isicelo kwi-Playsrore
Isicelo se-Yurie BSF yinkqubo eyenziwa ngamabomu, ukukunceda ukuphumeza ukulima BSF fly ukusuka kumaxwebhu kunye namavidiyo okufundisa kwimpumelelo yokuveliswa kwemveliso Inkomo zeMaggot/ yobu ngevumba.
U-Yurie BSF ekwakheni izicelo usebenzisa izixhobo zolwimi ezinzulu kakhulu. I-Chat Live LIVE ngaphandle kokushiya okanye ukuphuma kwisicelo. Ngoko ukuba kukho imibuzo unako ukuthumela ngokukhawuleza.
Ngaphandle kokuziqhelanisa, umthwalo wefayili umncinci kwaye ulula, okuyi 17 MB. Ngoko ukuba ayiyi kulayithisa i-cellphone yomsebenzisi.
Enye into i-Yurie BSF yesicelo ihamba kunye ne-step-by-step SOP ukwenza kube lula kubasebenzisi ukusebenzisa yonke into yesifundo kwisicelo.
Kwaye inenzuzo kukuba ngenxa yale sicelo unako ukusebenzisana nomsebenzisi omnye nomnye umsebenzisi. Ngoko ke luncedo kakhulu kubasebenzisi be-Yurie BSF. Khuphela i-Yurie BSF Isicelo
Yiyiphi indidi i-Yurie BSF Isicelo?
Zininzi iintlobo zeeklasi ezivela kwisicelo equlethwe kwindawo yokudlala. Emva koko isicelo se-Yurie BSF sibandakanywa kuyo?
Zixhobo zo ku sebenza
Kuqukwa kuloluhlu kukuphucula ukusebenza kunye nokusebenza kwe-smartphone ye-Android. Imizekelo: Ukhuseleko lwe-360, i-Master Clean, i-Google Translate, i-Greenify, iRekhodi yomculo, njl.
Iintlobo zesicelo sezicelo zentlalo zenza abasebenzisi badibanise nabanye abantu abaninzi. Umzekelo: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, njl
Ukubonelela izixhobo kubasebenzisi ukuba bahlanganyele nge-chat okanye ngezwi. Umzekelo: BBM, WhatsApp Messenger, LINE, Facebook Messenger, WeChat, KakaoTalk, njl.
Olu hlobo lwesicelo lusetyenziswa ngokubanzi kwiinjongo zokufota. Imizekelo: Ikhamera360, PicsArt, B612, Magisto, MomentCam, kunye ne-Adobe Photoshop, njalo njalo.
Iindaba kunye nesicelo seMagazini
Izicelo Iindaba kunye neeMagazini Ukusetyenziswa isicelo seendaba okanye iphephancwadi enokufundwa ngqo kwi HP HP Example: BaBe, Kurio, Detik, VivaNews, Kompas, njl.
Isicelo sokuzonwabisa kukuzonwabisa. Umzekelo: umculo, imidlalo, iTV, ukuhanjiswa kwamavidiyo.
Isicelo se-Yurie BSF siwela kuloluhlu, oko kukuthi isicelo semfundo. Ngokubanzi ukusetyenziswa kwale nqanaba kujoliswe ekuncediseni kwimfundo. Imizekelo: Imidlalo Yezemfundo Yezingane, i-Smart Kids, i-Smart Mathematics, i-Duolingo: UkuFunda kweeNtetho zeNtlanzi, njl njl.
Ngenxa yokuba isicelo se-Yurie BSF siyimfundo ngokwazo le sicelo ayiyi-ad-free ukwenzela ukuba abasebenzisi bafunde ngokukhululekile ngaphandle kokuphazanyiswa zizibhengezo.
Izikhangiso ezibonelelwe ngokubanzi zijolise ekufumaneni umvuzo ohlawulwa ngabathengisi. Oku kuthetha ukuba isicelo se-Yurie BSF esingenasiphelo asifumani naliphi na imali evela kumsebenzisi.
Oku kucocekileyo nguYurie BSF ofuna ukwabelana nge100%.
Ziziphi iimpawu kwi-Yurie BSF Isicelo?
Kukho izinto ezininzi kangaka kule sicelo, oko kukuthi
I-Rp100.000.000 Business Aid Fund,
Ukuhlakulela kwe-BSF yanamhlanje ngaphandle kweS SMELL
Iphakheji yeGold Plus
Iplatum Plus Iphakheji
I-Yurie BSF Imfihlelo
Mayelana nathi Yurie BSF
U-Yurie BSF yedwa yinkampani ephayona ukulima BSF neengqungquthela zanamhlanje kwihlabathi.
Ukuveliswa kwempepho engenasiphelo isebenzisa inkunkuma, udoti, umgquba wemfuyo. Ukuhlakulela umlingo i-odorless ayiboni ukuvumba, ayisebenzisi iziyobisi kwaye ayifuni umshini.
Ngoko ukuveliswa komlingo kulula kwaye kungabizi, kuphakathi kwe-Rp. XUMX-Rp. X XXX ngekg
Lo mnikelo kubahlobo uhlawulelwe kubahlobo baka-Yurie BSF abazithengisa ngenyameko umtshini wabo ku-Yurie BSF.
Injongo yolu luncedo ngu-Yurie BSF abahlobo ukuqhubela phambili ukwandisa imveliso yabo i-maggot ne-jul ku-Yurie
Kulo mzekelo uqeqesho lweevidiyo ezahlukeneyo ekusebenziseni ukulima kwemaggot ngaphandle kokuvumba. Ujonga nje kwaye uyayisebenzisa ngokuya kwizikhokelo kwividiyo.
Iividiyo zokufundisa kule ndawo azihanjiswanga kumajelo asekuhlaleni nakwi youtube. Ngenxa yokuba le vidiyo kunye nomqulu unikezelwa ngqo ngabahlobo bakaYurie.
Ukufunda ukuhlakulela mahala i-100% umgog, le phakheji ngokukodwa kwabo bangenakho ukuthenga ipakethi ehlawulwe. Imiqathango nemeko nceda uqhagamshelane noMakak Yurie kwi-0812-2105-2808.
Kutheni i-Yurie BSF Isicelo ebalulekileyo?
Ngenxa yokuba le sicelo sixhobo somsebenzisi kwindlela yokuhlakulela umququ ngaphandle kokuhogela
Ngaphambi kokuba usebenzise, ​​ungafunda ngokujonga iividiyo zokufundisa kwisicelo. Ngoko xa uhamba epulazini kukho inkcazo yokuqala.
Emva kokuziqhelanisa, kubakho izinto ezincinci esizilibalayo, okanye nje sifuna ukuzikholisa xa sisebenza ekhaya, ngoko kufuneka uqale kwakhona le khosi yevidiyo.
Ukuhlaziywa kwemihla ngemihla kwiifom kunye namaxwebhu abalulekileyo ahlaziywa ngolu hlelo, ngoko ke naphi na apho uya kufumana izaziso zakamuva kunye nokuhlaziywa malunga nokulima umlingo ngaphandle kokuhogela.
Bobabini abaqalayo kunye nabadala bayakufuna ukuhlaziywa kwamashishini ekuhlaziyiweyo kwamaggot kunye nolwazi luthunyelwa kule sicelo.
Isicelo se-Yurie BSF sihambelana njani neNtuthuko yezilwanyana zeMaggot?
Ngokwenza oko kukho imfuneko yesikhokelo ngqo kunye ngqo. Kwaye amanyathelo okwenzayo.
Ividiyo esebenzayo kwisicelo sele ihlelwe ngendlela enokuthi ilandelelaniswe isinyathelo kunye nenyathelo ngokulandelelana kwaye kukho i-SOP (inkqubo esebenzayo yokusebenza). Ngoko ke kukho ukulingana kwendlela yokusebenza kwaye kunjalo ke iziphumo zilindeleke ukuba zifanane (kungeyiziqhwala)
Abahlobo bakaYurie yonke indawo ngokulandela izikhokelo kwisicelo kulindeleke ukuba bafikelele ekujoliswe kuko kuvuna ngamakhulu eekg yeemgogo zingaphantsi kweenyanga ze-1,5.
Yaye indlela yokufezekisa oku kukulandela ukufundiswa kwevidiyo. Ngoko le sicelo ibaluleke kakhulu kwaye ifuneka kakhulu ukuze kufezekiswe iinjongo zokuvelisa umququ ezineziphumo ezininzi kunye neziqhamo.
Izibonelelo kunye nokusetyenziswa kwezicelo ze-Yurie BSF
Akagxininiswa kuba amanyathelo omsebenzi acacile
Kukho iindlela ezichanekileyo zokunciphisa amaphutha kunye nokushiya.
Imveliso yamagqubutha yansuku zonke iqinisekile kwaye iyimimandla
Ulungelelaniswe ngakumbi ekwenzeni imveliso yemaggot.
Ukudala imigangatho yokusebenza kunye neziphumo zekhonkrithi
Yiba nezixhobo zokuhlalutya ukuphucula imveliso
Yiba nesikhokelo sokuhlola umsebenzi owenziweyo.
Ukudala uhlanga olukhuselekileyo nolonqabileyo ukukwenza ngokukhawuleza ukwenza umququ.
Ulungelelaniswe ngakumbi kwaye usebenza kakuhle.
Ngaba isikhokelo ekusebenzeni imifino yamaggot nsuku zonke.
Gwema umsebenzi oqaqambileyo.
Ukuba kukho impazamo, kulula ukuphequlula nokuhlalutya
Inkqubo yomsebenzi iqinisekisiwe ngakumbi kwaye ikwazi ukuqhuba kakuhle kwiimeko.
Isishwankathelo se-Yurie BSF Izicelo
Isikhokelo sokufundisa kwisicelo sisixhobo kunye nesithuthi esiphumeleleyo sihlakulela umgog ngaphandle kokuvumba.
Esi sicelo sinempembelelo enkulu kwizinga lokuphumelela lokuvuna iikhilomitha ezili-kg ngaphantsi kweenyanga ze-1,5.
Ukulandela izikhokelo kwisicelo kuqinisekisa ukuba uphumelele kwimveliso yamaggot, umveliso oqhubekayo, ngaphandle kokuxinezeleka, ukhuselekile, ukhululekile kwaye ukwandisa ukuzithemba kunokusebenzisa umlimi wamaggot kwixesha elide.
99 Indawo yeMaggot ngaphandle kweBau Ranch
Uhlalutyo lwesine lwe-Maggot Cultivation Scale
Ukuthengisa nokuthenga nokuthengisa iMaggot
I-FAQ yoLimi lweMaggot
Imephu yeSayithi Yurie BSF
I siNgesi Version